सोधिने प्रश्न - CCIC परीक्षण लिमिटेड कं,
चीन प्रमाणीकरण र निरीक्षण (समूह) फ़ुज़ियान कं, लिमिटेड
उत्पादन निरीक्षण समयमा
पर्यवेक्षण कन्टेनर लोड
निरीक्षण सेवा प्रकार
कारखाना अडिट Helping you understandasupplier,Including supplier’s capabilities. quality control system, management and operating procedures.
पूर्व उत्पादन निरीक्षण उत्पादन हुनु भन्दा पहिले ,गर्न ई ing्ग you make sure the raw materials and components will meet your specifications and are available in quantities sufficient to meet the production schedule.
उत्पादन निरीक्षणको बेला (DPI) उत्पादन प्रक्रियाको बखत उत्पादनहरू जाँच गर्दैछ र पर्नदेखि केही कमजोरीहरू देखिने, यो पनि तपाईं जाँच गर्न मद्दत गर्न सक्छ उत्पादन तालिका र यकिन उत्पादनहरु जब तयार हुनुहुन्छ भनेर ढुवानी समय .
प्रि-शिपमेंट निरीक्षण (PSI) यो एक धेरै प्रभावकारी निरीक्षण हो जसले सम्पूर्ण शिपमेंटको गुणवत्ता स्तर जाँच गरिएका नमूनाहरू ।
सुपरिवेक्षण लोड गर्दै यो वितरण प्रक्रियाको क्रममा एक महत्त्वपूर्ण चरण हो, यसले तपाईंको उत्पादनहरू सही । तपाइँका उत्पादनहरू प्राप्त नगरेसम्म तपाइँको उत्पादनहरूको राम्रो गुणस्तर र सर्तको ग्यारेन्टी गर्दै।
मलाई निरीक्षण वा कारखाना अडिटहरू किन चाहिन्छ?
कुनै खराब गुणवत्ताको मामलामा, गलत लदान, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिंगको समयमा आपूर्तिकर्ताहरूबाट अवास्तविक जानकारी। खरिददारहरूको फाइदाहरू जोगाउनको लागि निरीक्षण सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो।
तपाइँ निरीक्षणको समयमा के निरीक्षण गर्नुहुन्छ?
बिभिन्न उत्पादनहरूका बिभिन्न निरीक्षण पोइन्ट हुन्छन्। त्यसैले निरीक्षण कोटी ग्राहक र हाम्रो खाता प्रबन्धक बीच धेरै ध्यान दिएर केस द्वारा अध्ययन गरिनेछ।
सामान्य रूपमा, निम्न अनुसरण गर्नका लागि सामान्य निरीक्षण क्षेत्र छ:
२. उत्पाद विवरण / विवरण
F. कार्य / प्यारामिटर परीक्षण 5
.. पैकेजिंग / मार्किंग चेक
P. उत्पादन डाटा मापन
ment. क्लाइन्ट विशेष आवश्यकता
निरीक्षण दर के हो?
ह'sकong, ताइवान बाहेक चीनको धेरैजसो शहरहरूमा निरीक्षणको सबै समावेशी मानक दर प्रति दिन १ 168-२ USD man अमेरिकी डलर हो। यो मानक दर प्रति काम 12 कार्य घण्टा सम्म कभर (यात्रा, निरीक्षण र रिपोर्ट तयारी सहित)। निरीक्षकहरूको यातायात र आवास खर्चको लागि त्यहाँ कुनै अतिरिक्त शुल्क छैन।
कसरी निरीक्षण सुरु गर्ने?
ग्राहकले हामीलाई बुकि form फारम पठाउनुहोस् र २- days दिन अगाडि बुक गर्नुहोस्। हामी निरीक्षण को विवरण पुष्टि गर्न कारखाना सम्पर्क। ग्राहक निरीक्षण योजना र भुक्तानी पुष्टि गर्नुहोस्। हामी निरीक्षण गर्छौं र ग्राहक २ inspection घण्टा भित्र रिपोर्ट रिपोर्ट पाउँछौं।
थप विवरणहरू चाहानुहुन्छ?
ठेगाना: 20 तल्ला, न 75, पूर्व Jiangbin एवेन्यू, Mawei जिल्ला, फूजौ, फुजियान, चीन